को सानोवर्ण राजा प्रेरित — यात्रा ली
को सानोवर्ण राजा प्रेरित
आज हामी नागरिक अधिकार आन्दोलन को मुख्य नेता को विरासत मनाउन, डा. मार्टिन लुथर राजा जुनियर. प्रभु राष्ट्रको प्रेरित गर्न यो मानिस प्रयोग, र समानता तिर एक मान्छे सार्न. त्यहाँ अझै पनि गरिन काम छ, तर आफ्नो योगदान अमूल्य थियो. कुनै नायक सिद्ध छ, र डा. राजा कुनै अपवाद थियो, तर म धेरै तरिकामा उहाँको पराउँछु र म आफ्नो पैतृक प्रेरित छु. यहाँ मलाई प्रेरित भनेर आफ्नो जीवनको बारेमा तीन कुरा छन्.
1. न्याय लागि आवेग
डा. राजा हाम्रो संसारमा व्याप्त थियो कि अन्याय द्वारा वाक्क थियो, र यो विरुद्ध लडिरहेका आफ्नो जीवन समर्पण. बाइबलमा, उहाँले उहाँको संसारको लागि परमेश्वरको दर्शन देखे, उहाँले अगमवक्ताहरू दमन अन्त लागि कल देखे, र उहाँले पारित गर्न आउने न्याय हेर्न भावुक थियो. म न्याय लागि यो आवेग पराउँछु, र प्रार्थना परमेश्वरले मेरो हृदय मा यो काम जारी थियो. म थिचोमिचोमा परेका लागि लड्न र निराशजनक गर्न सुसमाचार प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ.
आफ्नो youthfulness बावजुद, डा. राजा भविष्यसूचक भाषण र क्रिस्टल स्पष्ट दर्शन आन्दोलन को नेता रूपमा निस्कनु उसलाई नेतृत्व. उहाँले फिर्ता बस्न थिएन र गुनासो, उहाँले अप कदम र नेतृत्व. उहाँले कालो मान्छे अगाडि सार्न मदत लाग्यो के स्पष्ट थियो, र त्यो दिशामा अरूलाई नेतृत्व. यो सधैंभरि संयुक्त राज्य अमेरिका परिवर्तन मदत कि गैर-हिंस्रक प्रतिरोध परिणाम. हामी सबै नेतृत्व यस प्रकारको सिक्न सक्छौं. यो नेतृत्वको विवाह गर्नुपर्छ जब दर्शन मात्र मूल्यवान छ. आफ्नो नेतृत्वको पारित गर्न आउन दर्शन मदत.
पक्कै, आफ्नो लडाई मुस्कान र गले भेटे थिएन. उहाँले आफ्नो जीवन उहाँले marched हरेक समय जोखिममा, कुरा, वा protested. उहाँले के उहाँले गरिरहेको थियो खतरनाक थियो थाह थियो, अहिलेसम्म उहाँले आफ्नो जीवन आफ्नो मान्छे को लागि लाइन मा राख्न साहस थियो. उहाँले सामना आफ्नो दृष्टि क्लाउड थिएन विरोध, वा आफ्नो नेतृत्वको मनोबल घट्यो. उहाँले झगडा भएको थियो किन यो केवल उहाँलाई सम्झना. म प्रभु मलाई काम भनेर उहाँको राज्यको लागि खडा छ र उहाँको महिमा लागि झगडे एउटा unshakeable साहस प्रार्थना.
म तपाईंलाई साथै उहाँको उदाहरण प्रेरित हुनुहुन्छ आशा, र मलाई आशा छ तपाईं उहाँले डा मार्फत पूरा के परमेश्वरको प्रशंसा मलाई सामेल छौँ. राजा.
Pstan26 • अगस्ट 19, 2013 मा 8:28 छु • जवाफ
Many people have lost his message, glad it is not lost on you Super Duper
for the love of Nigeria • अगस्ट 19, 2013 मा 8:29 छु • जवाफ
His life has definitely beenastandard, I used this oppurtunity to ask for us to pray for Nigeria, even as we make our input towards fighting for the Nigeria of our dreams, it shall soon beareality
Tamiehicks • अगस्ट 19, 2013 मा 8:30 छु • जवाफ
Thanks for share’n Trip
Dan Smith • अगस्ट 19, 2013 मा 8:30 छु • जवाफ
I agree that vision without leadership is wasted. It’s too bad, because I’m sure there were several people who foresaw the need for civil rights, and even how it could come about, but because they lacked leadership qualities, they are not remembered today. The same goes for the church. For every strong and visionary leader there are undoubtedly thousands who are merely visionary.
जवाफ रद्द गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
मीठो विजय भिडियो
यात्रा गरेको नवीनतम एल्बम देखि लागि मीठा विजय भिडियो जाँच, उठेर
Millennials र नस्लीय सुलह
यो सुसमाचारको र नस्लीय सुलह मा यात्रा गरेको पनि ERLC शिखर सम्मेलन देखि कुरा छ. तलको सन्देश देखि पांडुलिपि छ. यो साँझ, म millennials र जातीय मेलमिलाप बारेमा बोल्न आग्रह गरिएको छ. र म परमेश्वरको चर्च एकता तिर यो अचम्मको प्रयास भाग रूपमा यहाँ खडा र सेवा गर्ने सुअवसर महसुस. एक रूपमा
के विषय पुस्तक चर्चा गर्छ?
यात्रा नयाँ पुस्तकमा, उठेर, उहाँले यो पुस्ता सान्दर्भिक छन् कुराहरू लेख्न प्रयास. उहाँले सामग्री मा एक अधम शिखर को अध्याय केही मार्फत हिँड्छ र दिन्छ रूपमा हेर्न.
"यात्रा गरेको एक पुस्तक मलाई लाग्छ कि हरेक जवान व्यक्ति पढ्न आवश्यक लिखित. येशूको लागि आफ्नो आवेग र यो पुस्ता हरेक पृष्ठमा चर्को र स्पष्ट मार्फत आउँछ. म यो सन्देश उद्देश्य लागि भोक भन्ने एक पुस्ता मा छ प्रभाव हेर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। "- Lecrae, Grammy awarding- कलाकार @lecrae विजेता "उदय एक छ
Piper गरेको उदय Foreword
यात्रा नयाँ पुस्तक, उठेर, अब बाहिर छ! तल पुस्तक यूहन्ना Piper गरेको foreword पढ्नुहोस्. तपाईं पुस्तक-अर्डर पूर्व र थप Risebook.tv एक मा मुख्य कुरा को म यात्रा ली र आफ्नो किताबको बारेमा रुचि फेला पार्न सक्नुहुन्छ, उठेर, श्रद्धाको र सान्दर्भिकता को अन्योन्य छ. अमेरिकी संस्कृति मा सान्दर्भिकता मा उद्देश्य सामान्य छ.